नेपाली समाज र यौन ! - Online Majheri अनलाइन मझेरी
✍️बिष्णु पादुका , कोहलपुर -४,बाँके
नेपालमा अझै पनि यौनको विषयलाई अस्लिलताको आँखाबाट मात्रै हेरिन्छ । तर यँहिनेर एउटा भूगोल भित्रका यौन आचरण र ब्यवहारलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । नेपाललाई एउटा सुत्रमा बाँध्ने नाममा कुनै नियम कानुन बन्छन् । केही बिकशित शहर र काठमाडौ खाल्डोको अवस्था हेरेर नियम बनाइएको हुन्छ । देशका भिन्न भिन्न क्षेत्रहरूमा भिन्न संस्कार र परिस्थितिको बेवास्ता गरिएको पाइन्छ ।
यौन र बैबाहिक प्रणाली एक आपसमा जोडिएको देखिन्छ । यौन क्रियाकलापलाई बैधानिक बनाउन नै विबाहको संस्था या संस्कार बिकसित भएको देखिन्छ । बिबाहपछिको पारिवारिक उतारचढावका कारण पारपाचुके तथा दोश्रो या तेस्रो बिबाहलाई कानुनतः केही सिमा सहित बैधता दिइए पनि सामाजिक रूपमा कानेखुसी गर्ने र हेलाँको दृष्टिले हेर्न छुटेको देखिदैन ।
मान्छे स्वतन्त्र र विवेकशिल प्राणी हो । त्यसैले सामाजिक रूपमा उसले समाजले निर्धारण गरेका दायरा भित्र रहनुपर्छ । चलन धर्म हुँदै आज कानुनी रूपमा यो ब्यवहारमा लागू भएको छ । सिन्धु सभ्यताबाट आएका आर्य सम्प्रदायमा एक थरी संस्कार बिकसित भयो भने मंगोल समुदायमा अर्को अथवा भिन्न संस्कार चलेको देखिन्छ । कारणहरु विबिध भएपनी अझैसम्म बहुपती प्रथा समेत छन् देशका कुना कन्दरामा । जग्गा जमिन र घरबासको अभावमा मात्रै बहुपती प्रथा रहेको हो या त्यसको अन्य सामाजिक कारण पनि छ ।आजको युगमा त्यो संस्कार या ब्यवस्था कसरी टिकेको छ ? जब कि एउटा बिवाह दर्ता भए पछि त्यो लोग्ने या स्वास्नीले अर्को बिहे गर्न चाहे छोडपत्र र बिवाह दर्ता अनिवार्यको नियम छ । हाडनाता सम्बन्धी नियम पनि यदाकदा मिचिएको देखिन्छ कुनै जाती विशेषमा ।
मामा फुपुको छोराछोरी विच बिबाह हुनु र नहुनु प्रमुख फरक देखिए पनि अझ गहिरिएर हेर्दा धेरै असमानता भेटिन्छन् । केही वर्ष अगाडि सम्म अशिक्षा र चेतनाको अभावमा गर्ने बाल बिवाहा लगभग न्यून हुँदै गएको छ । बहु बिवाहलाई कानुनी बन्देज लागेको छ । बिस्तारै यौन र प्रजनन शिक्षा फैलिएको छ । तर पनि सामाजिक रुपान्तरणको हिसाबले यौनका बारेमा हेर्ने दृस्ठिकोण उस्तै पाइन्छ । उसो त शिक्षा र आत्मनिर्भताका कारण वैयक्तिक स्वतन्त्रताको दायरा पनि फराकिलो हुँदैछ । अन्य क्षेत्रको झैँ असमानताको दुरि सामाजिक रूपमा पनि देखिन्छ ।शहरीकरणको प्रभाव गाउँ गाउँमा पुगेको छ । हिजोको अनुदार र साघुरोपन घट्दो क्रममा देखिन्छ । तर पनि आजको स्वतन्त्रता काखी च्यापेको पुस्ता समेत यौनका बारे खुलेर बोल्न चाहेको पाइएन । सामाजिक संजालमा जोडिएका एकसय पचास साथी संग मैले एउटै प्रश्न सोधेँ, ” यौन के हो ? तपाईंको बुझाइमा आफ्नो अवधारणा दिनुहोस् ।” दुइचार जनाको बाहेक अधिकांशको जवाफ उस्तै पाइयो । प्राकृतिक प्रक्रिया , जैविक आवश्यकता अनि बिपरित लिङ्गी प्रतिको लगाव समर्पण र सन्तानोत्पादन ।
केही साथीहरूले फ्रायड वात्सायन र ओशोका बिचारहरु पनि सम्प्रेषण गर्नु भयो । यौनको विश्लेषण गर्ने विभिन्न दार्शनिकका कुरा पनि आए । यौनले सिर्जनसिल भुमिका खेल्छ खेल्दैन भन्ने बारेमा पनि फरक धारणा आए । प्रशिद्द डि एच लरेन्स , जेम्स जोयस जस्ता साहित्यकारहरु यौन असन्तुष्टिको मनोविकार लेख्थे भन्ने कुरा पनि आए ।
आफ्नो बौद्धिक र आत्मिक उर्जा एउटि महिलाको अगाडी समर्पित गर्ने मान्छे सुन्दर हुन सक्दैन भन्ने नित्से बर्षौ सम्म बेश्यालय धाउथे । जीवन भोगाइ पछि नै बल्ल साँचो चिन्तनको शुरूवात हुन्छ भन्ने सिद्धान्त नित्सेले प्रयोगात्मक तरिकाले देखाएका थिए । उनले निचोडमा भने कि आफ्नो उच्चतम सम्भावनाको हत्या गर्ने मान्छेको भिडले नै समाजमा कुरुपता ल्याएको हो । कुनै महान दार्शनिक बिवाहित हुन सक्दैन । मान्छे यौनबाट पूर्ण निस्पृह हुन सक्दैन । तर यौनमा कति निर्लिप्त हुने मुल प्रश्न यो हो ।
सम्पुर्ण प्राणीहरुमा पुस्ता हस्तान्तरणको निम्ति बनाइएको प्राकृतिक ब्यवस्था जसलाई मान्छेले कुरुप बनाइदियो । यौन जीवनको गुरुत्व केन्द्र हो ।एक थोपा स्पममा हुने असंख्य शुक्राणु जसमा जीवनका आनिबानी आकार रुप रोग सबै लुकेको हुन्छ । एक कोषिय देखि सम्पुर्ण प्राणिको उद्देश्य र लक्ष्य फैलिनु हो । त्यही प्रक्रियाको एउटा सुविचारित प्राकृत ब्यवस्था यौन हो ।
यौनका बारे किन पनि खुला बहस चलाउनु जरुरी छ भने हरेक ब्यक्ती नयाँ गर्न चाहन्छ । मानविय चेतना र मानसिकता सम्बन्धि अध्ययनहरुका अनुसार जो कोहि जीवनको कुनै एउटा अध्यायमा अरु भन्दा भिन्न देखिन चाहन्छ । हरेक ब्यक्तिको जीवनमा कुनै न कुनै दिन एउटा बलियो आवेग उद्घाटित हुन्छ । उसलाई के गरौं कसो गरौको असमन्जसताले घेर्छ । भिन्न देखिने चाहनाको उत्कर्षमा उसले परिणाम हेर्दैन । सकारात्मक उर्जाको अभावमा उसले गलत कदम चाल्छ । फलत: समाजमा जघन्य अपराध घटित हुन्छन् । नियम कानुन र समाचारहरु परिणामकै वरिपरि घुमेको देखिन्छ । समस्याको जरो पत्ता लगाउन कसैलाई फुर्सद देखिदैन । समाजले देखेको अपराध र अपराधीलाई दुधले नुहाउन खोजेको किमार्थ होइन । नियम कानुन छ उसले भोग्नु पर्छ । तर उसलाई थाहा नभएर अपराध गरेको हो ? मान्छे मारेपछी जेल जानुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन कुनै हत्यारालाई ?
जेलहरु जति बलिया र नियमहरु जति कडा भएपनि खोइ त अपराध घट्नु सट्टा बढेको छ । चेतनास्तर र शिक्षा पनि बढेको भनेर बोल्छन् तथ्यांकहरु । घटना कसरी घट्छ ? किन घट्छन् ? सामाजिक संरचना कस्तो छ ? आधुनिकता को दौड कुन रफ्तारमा छ ? सामाजिक विकास क्रम र आधुनिकता अनि अनुशासन र स्वतन्त्रता बिच तारतम्य मिले नमिलेको हेर्ने निकाय खोइ ?
जसको बाबू मर्‍यो उसैको छोरो टुहुरो भने झैँ अरुलाई पर्दा रमिते दर्शक हुने परम्परा देखि हामी कहिले माथी उठ्ने ? घटनाहरुको सूक्ष्म बिश्लेषण गर्न विभिन्न निकायमा छलफल चलाउनु जरुरी छैन र । जति हामी संकोच मान्छौ त्यतिकै हामिमा कौतुहलता हुन्छ । भएका भोगेका देखेका कुरा सम्म हामी अरुमाझ स्पस्ट राख्न सक्दैनौ । दबिदै गएका धेरै कुरा धेरै पछि कुण्ठाको रूपमा देखिन्छ । जुन कुरा ब्यक्ती र सामाजिक रुपमा नै अपराधको जड हो । जति खुल्ला रूपमा बहस गर्न सकिन्छ त्यति स्तरिय समाधान निस्कने हो । खुल्ला भनिएको समाज पनि त अपराध मुक्त छैन । हामिले भोगेको हिजोको समाज आज परिवर्तन भएको छ भोलि यस्तै रूपमा अवस्य रहने छैन । यसर्थ मानव जीवनको अपरिहार्य तत्व भएर पनि हरेक ब्यक्तिपिच्छे भिन्नता बोक्ने बिषयमा बोल्न लेख्न छलफल गर्न अलिकति उदारता देखाउने कि !
‘मिस एसईई युनिभर्सल र ‘मिष्टर एण्ड मिस एसईई ग्ल्याम’ एकसाथ
एउटै स्टेजमा एकसाथ तीन विजेता छानिने भएको छ । ‘मिस एसईई युनिभर्सल २०१८’ र ‘मिष्टर एण्ड मिस एसईई ग्ल्याम २०१८’नाम दुई सौन्दर्य प्रतियोगीता एकसाथ आयोजना हुँदैछ । जसमा फरक... Read More
मजदुर दिवस र मजदुरका पीडा !
‘ मे फर्स्ट’ , बिश्वका मजदुर एक हौं भन्ने नाराका साथ सम्पूर्ण मजदुर हातेमालो गर्दै हर्षोउल्लासका साथ मनाउँछन् । श्रमीकको हक हितको नारा सहित यसलाई उच्च महत्वको साथ कसरी... Read More
मंगलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तन बिरोधमा श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शन
अनलाइन मझेरी7months ago
मोराङको उर्लाबारिमा रहेको मंगलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तनको बिषयलाई लिएर भै रहेको बिरोध अन्तरगत आज पनि अस्पताल परिसरमा स्थानियहरुले धर्ना कार्यक्रम गरेका छन् । प्रदेश १ सरकारले उर्लावारी ३ स्थित... Read More
फास्ट ट्रयाक किन फासिष्ट ट्रयाक तिर लम्किदैं ? – सोम विक्रम सिंह
फास्ट ट्रयाक सेनाको लागि अपरिहार्यता भईसकेको र यो पद्दति लागु गर्न ढिलै भईसकेको पनि महसुस भईरहेको थियो । जुन पद्दति पैंतिस हजारबाट एक लाख सेनाको हाराहारीमा जाने बित्तिकै लागु... Read More